Umvangeli uboliswe ngenduku esolwa ngokweba inkomo - Ilanga News
Home Izindaba Umvangeli uboliswe ngenduku esolwa ngokweba inkomo
Umvangeli uboliswe ngenduku esolwa ngokweba inkomo
USALE emidwayidwa kanjena uMnu Mgqibelo Zikhali (61) othi unenebulwe ngabesiKebhe ngoba esolwa ngokweba inkomo. ISITHOMBE: SITHUNYELWE
UKHALA ngeminjunju nokujivazwa umvangeli weThesalonika Ukukhanya Apostolic Church in Zion KwaVimbukhalo, eMbazwana, okuthiwa unenebulwe ngamalungu esiKebhe ngoLwesibili olwedlule esolwa ngokweba inkomo endaweni.
UMnu Mgqibelo Zikhali (61), akagcinanga ngokushaywa, ubuye wayalelwa ukuba ahlawule ngezinkomo eziwu-9 obekufanele zilandwe izolo ngeSonto.
Ngokuthola kweLANGA, uMnu Zikhali ufonelwe ngamaphoyisa aseMbazwana esemzini wakhe oseThekwini, emtshela ukuthi makaye esiteshini njengoba kuthiwa ubonakele entshontsha inkomo.
Ekhuluma neLANGA, uthe namanje akalazi icala lakhe njengoba ehliswe isithunzi etalajwa phambi kwezingane zakhe, esolwa ngento eyenzeke engekho kwakuba khona kule ndawo.
“Bengisemzini wami ose-Avoca ngimatasa nokuwulungisa ngesikhathi ngishayelwa ngamaphoyisa. Ngiwatshelile ukuthi ngizofika ngesonto elilandelayo ngoba bengimatasa nomsebenzi emzini wami.
“Sihlelile ukuthi sizohlangana uma ngifika. Ngigodukile, kwathi uma ngifika eMbazwana, ngawashayela ucingo, angitshela ukuthi asaxinekile azongithinta sihlele ukuthi sibonana nini.
“Kudlule isikhathi ngashayelwa ngelinye iphoyisa lesifazane lingitshela ukuthi mangikhululeke ngiphindele eThekwini, ngiyoqhubeka nemisebenzi ebengiyenza ngoba umuntu ophethe udaba lokwebiwa kwale nkomo akekho, usahlabe ikhefu emsebenzini.
“Ngithe ngisalungiselela ukubuyela eThekwini, kwatheleka iqulu labantu besiKebhe langithatha lahamba nami, langitshela ukuthi ngintshontshe inkomo.
“Ngiyiswe kwesinye isitolo esingasasebenzi endaweni, bangishaya kuthiwa mangikhiphe le nkomo engingayazi. Umndeni wami uze wafika lapho bengishayelwa khona, kodwa baqhubeka nokungishaya ubuka,” kusho uMnu Zikhali .
UMnu Sphiwe Manyanga ongusihlalo wesiKebhe KwaVimbukhalo, uthe lukhona udaba lokwebiwa kwenkomo oluthinta uMnu Zikhali. Uthi umbiko abawutholile uveze ukuthi ikhona ingane eyambona nale nkomo asolwa ukuthi uyebile.
“Lolu daba siyalwazi, kumanje siyalusebenza. Ingane izivumele yona phambi kwesiKebhe ukuthi yambona uZikhali eqhuba inkomo,” kusho yena.
UMnu Tofelo Mhlongo oyinduna yakule ndawo, uthe udaba lokushaywa kukaMnu Zikhali selufikile kuyena.
Uthi uzwile ngezinkomo eziwu-9 okuthiwa kumele azikhokhe, kodwa-ke ube esethumela iphoyisa lakhe ukuze liyobona ukuthi kwenzekani kwazise yena usathathwe yindlela.
“Lolu daba selufikile kimina, sizoludingida emkhandlwini uma isikhathi sesifikile,” kusho yena.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe amaphoyisa abiziwe izolo ngeSonto KwaVimbukhalo, kodwa othintekayo kulolu daba wathi ngeke alivule icala.
Previous articleUMiddendorp uzigxeka ngodaka lweChiefs
Next articleKunzima kunina wendodakazi ‘ebulawe yisoka’